के भारतमा काम गर्ने नेपालीको जन्मभूमी फर्कने अधिकार छैन त सरकार?
भारतका कुना कुनामा छरिएर आफ्नो रोजीरोटी कमाइको सिलसिलामा आउनु भएका नेपालीको समस्या यो लकडाउनमा न त नेपाल सरकारले सुन्यो न त नेपाल सरकारले खटाएका भारत स्थित नेपाली राजदुतले नै सुने। हामी खोलापारी बस्ने प्रभासी नेपालीलाइ अहिले नेपाल सरकारले आफ्नो नागरिक नै मान्दैन। कोरोना भाइरस र यो विरुद्ध भारत सरकारले गरेको लकडाउनले गर्दा धेरै नेपाली अहिले भारतमा अलपत्र परेका छन्। आफ्ना नागरिक जहाँ भए नि सहयोग गर्नुपर्ने सरकारले अहिले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दै गैरजिम्मेवार बन्यो र भारत स्थित नेपाली राजदुतले नेपालीका समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिएनन्।
होटेल छेत्रमा काम गर्ने धेरै मजदुरहरुको अहिले बिचल्ली परेको छ। एउटै कोठामा १०-१२ जना बस्नु पर्ने बाध्यता, खानलाई रासन छैन, कोठा भाडा तिर्न पैसा छैन, नेपाल जाउ बोडर बन्द छ, यहि बसौ बिचल्लीमा परिन्छ। यदि कुनै दिन गाडी चले पनि धेरै नेपालीसग घर जान गाडी भाडा नि छैन। मुम्बईमा मात्र केहि दिन पहिले एक परिवारले आत्महत्या गार्यो। यदी यहि अवस्था अझै केहि दिन हुने हो भनि धेरै नेपालीको भोकमरीले ज्यान जान नि सक्छ।
दुतावासको भूमिका प्रभावकारी देखिएन
नेपाली राजदुत श्री निलाम्बर आचार्यले बिभिन्न अन्तर्वार्तामा भारतमा नेपालीलाई कुनै समस्या नभएको बताए पनि जमिनी हालत त्यसको बिपरित देखियो। दुतावासले जारि गरेको हेल्पलाइन नम्बर धेरै पटक फोन गर्दा पनि उठ्दैन। हाम्रो दुतावासको अहिले नकुनै आर्थिक कोस छ नकुनै सहयोग गर्ने संयन्त्र। “जहाँ छौ, सुरक्षित रहौ” भन्ने नारा मै दुतावास सिमित छ। यस्तो लाग्छ दुतावास आफै आइसोलेसन छ अहिले र उठन धेरै समय लाग्छ।
नेपालमा अहिले बालीनाली लगाउने समय भएको छ। यदि अहिले नेपाली आफ्नो घर जान पाए धेरै नेपाली बालिनाली लगाउथे र हरेक साल हुने भोकमारीबाट देशलाई बचाउन सकिन्थ्यो। के हाम्रो आफ्नो जन्मभूमी फर्कने मौलिक अधिकार नै छैन त? के आफ्नै देशको माटोमा रमाउने अधिकार छैन त। मर्ने परे आफ्नै देशमा मरौला, बिन्त्ती छ सरकार भारतमा बस्ने नेपालीलाइ छिटो उद्दार गर। यदि दुखमा देश काम नलागे,अरु बेला देशको के काम ?
(लेखक समाजबादी पाटी नेपालको भात्री संगठन प्रगतिशील नेपाली समाज समिती भारतका उपाध्यक्ष तथा पंजाब राज्य इन्चार्ज हुन्)